Ebe kachasị mma iji zoo mmiri na Morocco | Njem zuru oke
Ebe kachasị mma ịgbaba na Morocco
North Africa bu Morocco, obodo mara mma ma ochie nke nwere oke osimiri abụọ na Atlantic Ocean na Oke Osimiri Mediterenian. Ọwara a ma ama nke Gibraltar kewara ya na Europe yana n'ihi ọnọdụ dị ya nso na mma ndị sitere n'okike na ọdịbendị ọ na-enweta ọtụtụ njem.
Ma ị maara nke ahụ na Morocco e nwere ebe imi? Nke ahụ ziri ezi, na mgbakwunye na saịtị ihe nketa ụwa, ememme ya na gastronomy ya, Morocco jiri ekworo na-echekwa ebe ụfọdụ ka mmiri zoo na snorkel. Taa, anyị ga-ezute ha.
2 Mmiri mmiri na Morocco
3 Ebe amaba na Morocco
Dị ka anyị kwuru, mba a bụ north africa, bụ mba nwe obodo nke nwere ogologo akụkọ mgbe ochie jikọtara ya na Spain na France. Ala ndị a ebikọala kemgbe oge ochie, yabụ ọtụtụ ọdịnala agafewo ebe a.
Alakụba rutere na njedebe nke narị afọ nke asaa ma site na aka ya na-enwu obodo dị ka ihe mara mma Fez, Marrakech, Rabat na Meknes. Banyere ọdịdị ala ya, Morocco nwere ugwu na mbara ala ma nwee a Ihu igwe Mediterranean n’ikperé mmiri ya na n’elu kọntinent ndị ọzọ.
Ọ bụ kpomkwem na coasts ebe ebe a ga-amaba na mmiri.
Mmiri mmiri na Morocco
Mmiri mmiri na Morocco nwere ike ọ gaghị adaba n'otu ahịrịokwu. Mmadu chere banyere obodo a ma chee anya ohia, kamel, ndi njem, safaris, bazaa na otutu ndi na ere ahia na udiri udiri ala. Mgbe ahụ, Nwere ike ịmakwu mmiri? Eeh.
Niile ọdịbendị ọdịbendị ya na-ekpuchi ntakịrị ịma mma nke ụsọ mmiri ya, na enweghị ụkọ nke ndị Europe ha chere na e kwesịrị ịmachi mmiri mmiri na Morocco, ma ọ dịghị otú ahụ. Ọ dịghị amasị na ị nwere ike ịmaba ebe ọ bụla, yabụ na ị gaghị aga kpamkpam na atụmanya dị elu.
Na Morocco enwere ebe mgbaba na ole na ole ma ha adịghị nso. Yabụ, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịbanye na mmiri mmiri, ị ga-ebu ụzọ chọọ ebe ị ga-aga ma gbagoro ebe etiti ahụ. Ọ pụtaghị na ị ga-asụ ngọngọ na saịtị ndị a na mberede.
Morocco bụ otu ohere ahụ dị ka Florida, mana mmiri ya jụrụ oyi karịa, ọ bụ ezie na mmiri ndị ahụ dị nro ma na n'ozuzu oke osimiri dị na mmiri. Ọ na-agbakọ na ọnọdụ okpomọkụ dị na etiti Morocco, na-ekwu okwu banyere mmiri, dị ihe dị ka 15ºC n'oge oyi na 25ºC n'oge ọkọchị.
N'ihe banyere ndụ mmiri, otu uru dị na mmiri mmiri na Morocco bụ enwere ọtụtụ anụ ọhịa. N'ezie ọ bụ otu n'ime ebe ole na ole n'ụwa ebe a na-egwu mmiri na dolphins n'oké osimiri. Yabụ, enwere ụlọ ọrụ na-egwu mmiri na-ejikọ ụgbọ mmiri na dolphin na-ekiri ma na-egwu mmiri ọ bụla. I nwekwara ike ịhụ osimiri nduru ma ọ bụrụ na ị nọ n’elu mmiri ahụ enwere tunas, eels, ndi otu na bream.
Ihe kachasị mma banyere mmiri mmiri na Morocco bụ nke ahụ ọ dị na map maka mmiri izugbe, ya mere onye ọ bụla bịara ebe a ga-enwe nnukwu uru nke ịnọ na ọtụtụ ndị. Ihe kachasị mma mgbe mmiri mmiri na-abata n'ihu igwe mmadụ ka ị ghara ịtụ egwu azụ na ebe a na Morocco nke dị mfe. Otú ọ dị, ọ bụghịkwa ihe ịtụnanya nke ndakpu mmiri na nsị ya mere ọ bụrụ na ịga na atụmanya dị elu ị ga-enwe mmechuihu.
Ebe amaba na Morocco
Agadir Ọ bụ ezigbo ebe ịmaba mmiri na Morocco. Ọ bụ obodo nke bụ isi obodo mpaghara Souss-Massa ma nwee ụsọ oké osimiri na Atlantic Ocean. Ọ dị kilomita 600 na ndịda nke Rabat na 440 kilomita site na Casablanca.
Ndi Portuguese hiwere Agadir na narị afọ nke 1960 na XNUMX ọ nwere nnukwu ala ọma jijiji. Ọ nwere ọdịbendị bara ọgaranya nke mere na ị nwere ike ikpokọta ihe niile n'otu njegharị. I nwere ike iku otu Ọpụpụ nke oge 45.
Mmiri dị ọkụ, ọ bụ ezie na enweghị ntụkwasị obi ọhụụ. Ọ kachasị mma ịlele ọnọdụ ihu igwe tupu ịdebanye aha. Ntughari mmiri na Agadir jikọtara ya na njem ụgbọ mmiri ma na-ebido n'etiti ụtụtụ, ihe dịka elekere 9:30 nke ụtụtụ, na họtel họtel.
Njem ụgbọ ala na-akpọrọ ndị njem ahụ gaa n'ọwa mmiri nke obodo ahụ ebe ụgbọ mmiri na-echere ma mgbe ha kwagara ọkara awa, ha rutere ebe ahọpụtara ebe ha nọrọ ihe dị ka nkeji iri anọ na ise. Njegharị ahụ gụnyere ihe ọ drinksụ drinksụ na nri ehihie ma ọ bụrụ na ịnweta ihe ụtụ azụ. Return laghachi na nkwari akụ ahụ gburugburu 45 n'ehihie. Iji were ụgwọ njem ahụ, a ga-enwerịrị opekata mpe otu.
Ebe ọzọ mmiri abanye na Morocco bụ Dakhla, na ndịda obodo ahụ.
Obodo a dị n’ebe ọdịda anyanwụ Sahara ma taa, ọ bụ Morocco bi na ya. na-adabere na a warara Peninsula n'ụsọ Oké Osimiri Atlantic, Ala ndị dị na Río de Oro. Ala ndị a ebirila ndị Berbers ruo ogologo oge, ma ebe obibi a toro site n'aka ndị Spain bịara dị ka ndị ọkụ azụ si Canaries dị nso.
Taa Dakhla bi site na ịkụ azụ na njem nleta na oge ụfọdụ akụkụ a bụ mmiri egwuregwu mecca na Morocco, na-ewu ewu nke ikuku ikuku, kitesurfing na sọọfụ. Na nke ka pere mpe, ihe ndakpu. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ndị na-eche na ebe ezumike a bụ obere paradaịs maka bọs ebe ọ bụ na mmiri nnu dị ukwuu. Na Dakhla ị nwere ike ime njem dị n'ime obodo ma ọ bụ n'oké osimiri iji hụ ọmarịcha mmiri ya na mmiri ya azụ dị egwu.
Essaouira Ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri na obodo ndị njem nlegharị anya dịkwa n'akụkụ ụsọ Oké Osimiri Atlantic. Zuo ike na a n'ọnụ mmiri emechiỌ nwere ọmarịcha obodo ochie, nke nwere mgbidi nke na-ele anya n'oké osimiri, ọ makwara mma. O nwere ihe nile na osimiri ya, nke ikuku ahia na-emetuta, bu ezigbo ebe egwuregwu di kitesurfing, ikuku ikuku na sọọfụ. Ihu ọma otu ihe ahụ dị ka Dakhla, ọ na-agbakwụnye ebe a kwa mmiri mmiri, ọ bụ ezie na ọ bụghị isi iri.
Eziokwu bụ na mmiri dị ntakịrịHa anaghị adị ọcha ụbọchị ole na ole, yabụ mgbe edepụtara ya, enwere ọtụtụ nyocha ndị na-adịghị mma. Ruo ugbu a, anyị ekwuola banyere ịba mmiri na Morocco na mmiri Atlantic, mana gịnị maka mmiri Mediterenian? Coastsọ Oké Osimiri Mediterenian adịghịkwa mma, enweghị ọtụtụ azụ na ụfọdụ na-ekwu na mgbe ụfọdụ na n’ebe ụfọdụ ọ dịka ịba mmiri na nsị. Ọ bụ ya?
Eziokwu bụ na obodo Essaouira bụ nnukwu ebe, nwere ezigbo ndị mmadụ, ezigbo nri na ọtụtụ ndụ n'obodo ahụ, mana obere n'ụsọ osimiri. E wezụga egwuregwu ndị a kpọtụrụ aha na mbụ, nke na-ewu ewughị ama, ọ siri ike ịsị na imi mmiri ebe a kwesịrị ya. Na mpụga ụsọ mmiri enwere ụfọdụ agwaetiti mana ha abụghị ezigbo ebe aga nsị ma ọ bụ ndakpu mmiri n'ihi oké osimiri nwere ike ịbụ a bit ike ike, n'ihi ikuku Atlantic.
N'ezie, buru n'uche na Essaouira bụ obodo na-eku ikuku na ogologo ogologo ọkpa na ihe na-ekpo ọkụ bụ ihe ị ga-etinye na akpa gị mgbe niile. Ma hey, isi ihe ọ bụ banyere ịnọ na mmiri ma ọ bụghị n'okpuru ya ...
N'ikpeazụ, iji banye na Morocco ị kwesịrị ịma nke ahụ oge mmiri na-abụ n'afọ niile n’ihi na ihu igwe dị mma n’oge niile. Dị ka anyị kwuru n'elu, n'ọnwa Jenụwarị ruo Machị ọ dị ihe dịka 17'C yana n'agbata Julaị na Septemba, 23ºC. Ọ dịghị njọ ịbanye na mmiri.
Marakwa nke ahụ enweghị ọtụtụ ụlọ ọrụ na nke ahụ dị mma n'ihi na enwere ọtụtụ ndị na saịtị mmiri na ị na-esonyere onye ọkachamara mgbe niile. Nke a abụghị obere okwu, mmiri na-agba ọsọ ya mere ọ dị mma ịnọnyere onye ma ihe ọ na-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ebe kachasị mma ịgbaba na Morocco
Onye kacha masị m ịmakpu mmiri bụ Dakhla na enweghị mgbagha, na ndịda Morocco, paradaịs, mara mma.
Nwere ike ịnye m ozi gbasara ebe ahụ ... mmiri dị mma ebe ahụ? Achọrọ m ịga na Mee 2015 ma enweghị m ike ịchọta ọtụtụ data ... daalụ nke ukwuu
onye nduzi marien garcia dijo
ị nwere ike ịgwa m ụfọdụ ebe mmiri na-agba mmiri dị na dajla? Enweghị m ihe ọ bụla na ịntanetị
Zaghachi onye nduzi marien garcia
Akụkọ banyere Hans Brinker
Mygha nke Amazons